Semalt ले तपाईंको साइटबाट नक्कली ट्राफिक बहिष्कृत गर्न पाँच कारण दिन्छ
के तपाईं सामग्री बजार वा वेबसाइट मालिक तपाईंको बिक्री राजस्व सुधार मा काम गर्दै हुनुहुन्छ? कालो फ्राइडे सम्पूर्ण वर्षको सर्वश्रेष्ठ दिनहरू हो जुन तपाईंको बिक्रीलाई स्काइरकेट बनाउन सक्छ। तथ्या shows्कले देखाउँदछ कि Black अर्ब डलर भन्दा बढीको बिक्री ब्ल्याक फ्राइडे २०१ 2016 मा रेकर्ड गरिएको छ। यस वर्ष बिक्री राजस्व बढेर $.3636 अर्ब डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा .4 ..4 प्रतिशतले वृद्धि हो।
प्रत्येक वर्ष, ई-वाणिज्य वेबसाइटहरू २० करोड भन्दा धेरै आगन्तुकहरूको सामना गर्दछन्, जहाँ २०% आगन्तुकहरू बट्स र वेब माकुरो हुन्। अनलाइन सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने प्रत्येक सामग्री बजारहरूले उनीहरूको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूमा सफा र सटीक डाटा प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
खराब बट्सले तपाईंको ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीलाई बिगार्न सक्छ र तपाईंको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन अभियानलाई गलत दिशामा बदल्न सक्छ। खराब बट्सले राजस्व उत्पादन र बिक्रीमा असर गर्दैन, तर B2C र B2B व्यवसायहरू अनलाइनमा पनि संचालन गर्दछ। खराब बट्स, आन्तरिक ट्राफिक, र वेब स्पाइडरहरूले नकारात्मक रूपमा तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स डाटा र रिपोर्टहरूलाई असर गर्न सक्छ। Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्को, निम्न पांच तरिकाहरू प्रस्तुत गर्दछ खराब बट्सले तपाईंको कालो फ्राइडे बिक्री र राजस्वलाई असर गर्न सक्छ:
१.अन्य वेबसाइट रिपोर्टहरू
खराब बट्सले तपाईंको GA डाटा स्केच गर्न काम गर्दछ तपाईंको साइटमा ट्र्याफिक प्रदूषित गरेर। लामो दौडमा, यो तपाइँको वेबसाइटको गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्डमा वास्तविक र नक्कली ट्राफिक फरक पार्न केहि अटुट छ। तपाईंको GA रिपोर्टमा डाटाको गलत व्याख्याले तपाईंलाई गलत व्यापार निर्णयहरू गर्न अग्रसर गर्न सक्छ। गत वर्षको तुलनामा तपाईंको ब्ल्याक फ्राइडेमा कठोर गिरावटबाट पीडित हुन GA उपकरण प्रयोग गरेर तपाईंको डाटाबाट बोट ट्राफिक बहिष्कृत गर्नुहोस्।
२. सूचीबद्ध प्रयोगकर्ता अनुभव
खराब बट्सले ई-वाणिज्य वेबसाइटहरूलाई उनीहरूको समग्र प्रदर्शन सुस्त बनाउँदछ। यो परिदृश्यमा एक प्रतिकूल प्रभाव प्रयोगकर्ता हुन्छ जो ढिलो गतिमा पृष्ठहरू भ्रमण गरे पछि फिर्ता क्लिक गर्दछ। लामो दौडमा, आगन्तुकहरू आफ्नो खरीदहरू पूरा गर्न अन्य वेबसाइटहरूमा उफ्रन्छन्।
Gh. भूत गाडाहरू
कार्ट त्याग साँचो बोराद्वारा साँचो खरीददारहरू र दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटहरूमा आगन्तुकहरूलाई ड्राइभ गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख रणनीतिहरू मध्ये एक हो। खराब बट्सले वैध आगन्तुकहरूलाई वास्तविक उत्पादनहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्न उत्पादनहरूमा केही अर्डरहरू प्रतिस्थापन गर्न काम गर्दछ। भूत गाडाहरूले तपाईंको कालो फ्राइडे बिक्री र राजस्व उत्पादनमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ। खराब बट्सलाई तपाईंको आउँदो लिन नदिनुहोस्। तपाईंको साइटमा नयाँ फिल्टर थपेर तपाईंको ई-कमर्स वेबसाइटबाट दारोडर र बोट ट्राफिक ब्लक गर्नुहोस्।
F. नक्कली ट्राफिक
बोट ट्राफिक, आन्तरिक ट्राफिक, र बोगस ट्राफिकले नकारात्मक रूपमा तपाईंको ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री बेच्न सक्छ। यो ट्रिक्स वेबसाइट मालिकहरू र मार्केटिंग परामर्शदाताहरु विश्वास गर्न को लागी उनीहरूको साइटहरुमा संचालित यातायात वास्तविक छ। खराब मालिकले ट्राफिकको लागि डलर भुक्तान गर्नबाट जोगिन वेबसाइट मालिकहरूले अवलोकन गर्नु पर्छ।
Operation. अपरेशनल थकान
बोट ट्राफिकले इन्टरनेटमा 58 58% भन्दा बढी ट्राफिक प्रतिनिधित्व गर्दछ। उत्पन्न गरिएको आन्तरिक यातायात र बोट ट्राफिकले चोटी घण्टामा तपाईंको वेबसाइट क्रस गर्न सक्छ। बोट ट्राफिकले डलर र समयको बर्बादी निम्त्याउन सक्छ। तपाईंको वेबसाइटबाट अनावश्यक ट्राफिक अवरुद्ध गरेर तपाईंको कालो फ्राइडामा अधिक बिक्री र राजस्व प्राप्त गर्नुहोस्।
बोट ट्राफिकले तपाईंको वेबसाइटको राजस्व उत्पादन र वृद्धिमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ। तपाईको गुगल एनालिटिक्समा सफा र सहि डाटा हासिल गर्नु सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको वेबसाइटमा नक्कली ट्राफिकलाई छोड्दै स्प्यामरहरूलाई अनावश्यक भुक्तान गर्नबाट जोगिनुहोस्।